InstaVC सम्बद्ध साझेदार कार्यक्रम, "inAffiliate" को साथ आफ्नो राजस्व स्ट्रीम अधिकतम गर्नुहोस् - inAffiliate
InstaVC सम्बद्ध साझेदार कार्यक्रम, “inAffiliate” को साथ आफ्नो राजस्व स्ट्रीम अधिकतम गर्नुहोस्
यदि तपाइँ तपाइँको दर्शकहरूलाई मुद्रीकरण गर्ने अवसर खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ सही ठाउँमा अवतरण गर्नुभयो! inAffiliate ले प्रत्येक योग्यता बिक्रीमा आकर्षक आयोगहरूको रूपमा असीमित कमाई क्षमता प्रदान गर्दछ।
inAffiliate एक भिडियो सहयोग सम्बद्ध कार्यक्रम हो, जुन 100% नि:शुल्क सामेल हुनको लागि हो, र यसले तपाइँको दर्शकको आवश्यकताहरू अनुमान गर्न र ठाडो बुद्धिमानी त्रुटिपूर्ण भिडियो बैठक र सहयोग समाधानहरू सिफारिस गर्न भुक्तानी गर्दछ।
यो किन आवश्यक छ?
महामारीका कारण भिडियो कन्फरेन्सिङको आवश्यकता बढेको छ । संगठनहरू टाढाको काममा सरुवा भयो, र कर्मचारीहरूलाई जडान राख्न अत्यन्त गाह्रो भयो। विद्यालयहरूले भर्चुअल सिकाइ प्रक्रिया सुरु गरे र शारीरिक व्याख्यानको सम्भावना बिना कसरी बौद्धिक शिक्षा प्रदान गर्ने भनेर अन्वेषण गर्न थाल्नुपर्यो। धार्मिक संस्थाहरूले उनीहरूको शिक्षा अनलाइन लिए। परिवारहरूले यात्रा गर्न सक्दैनन् र त्यसैले आफ्ना प्रियजनहरूलाई हेर्न इन्टरनेट प्रयोग गर्न सिकेका थिए।
तसर्थ, भिडियो कन्फरेन्सिङ एक सामान्य, र एक किफायती लक्जरी भएको छ। यो आज एक धेरै विशिष्ट आवश्यकता हो जसले ऊर्ध्वाधर बुद्धिमानी भिडियो बैठक सहयोगी समाधानहरू पुनर्विक्रयलाई पहिले भन्दा बढी आकर्षक बनाउँछ।
सामेल हुन नि:शुल्क र प्रयोग गर्न सजिलो, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले हरेक उद्योग ठाडोको अद्वितीय आवश्यकताहरू फिट गर्छ।
हाम्रो साझेदारको रूपमा तपाईलाई के फाइदा हुन्छ?
हाम्रो सम्बद्ध साझेदारहरूको कार्यक्रमले तपाईंलाई समाधानहरूको विस्तृत श्रृंखला, प्रभावशाली आयोगहरूमा सजिलो पहुँच प्रदान गर्दछ, र प्रत्येक चरणमा उत्कृष्ट समर्थन प्रदान गर्दछ। यो नि: शुल्क छ, यो सजिलो छ र यसले भुक्तानी गर्दछ!
हामी तपाईंसँग राम्रो मुद्रीकरण सम्बन्धको लागि तत्पर छौं, त्यसैले हामीसँग सेटअप गर्न र आजै सुरु गर्न निश्चित हुनुहोस्!
सहबद्ध एक प्रयास दिनुहोस्